Shanghai Knight (2022) စစ်​အေး​ခေတ် ဗြိတိသျှ​နေမဝင်အင်ပါယာနဲ့ ဂျပန်အင်ပါယာတို့ အာရှတိုက်တစ်ဝန်း နယ်ချဲ့ကျွန်ပြုထားတဲ့ ​ခေတ်ကာလတစ်ခုမှာ တရုတ်ပြည်မကြီးမှာလည်း မျက်နှာဖြူနဲ့ ဂျပန်​တွေ ကြီးစိုး​​နေတဲ့ အချိန်​ပေါ့၊ရှန်ဟိုင်းမြို့Bundအရပ်မှာ ဂျင်ဂွမ်ယုံဆိုတဲ့ သူ​ဌေးက ဆိပ်ကမ်း ၇ခုပိုင်ဆိုင်ပြီး ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းက​နေ စီးပွားရှာနေသူ​ပေါ့၊ သူနဲ့စီးပွားပြိုင်ဖက်က​တော့ အုချီယမဆိုတဲ့ ဂျပန်ပြည်ကလာတဲ့ သူ​ဌေးတစ်​ယောက်ပါ၊ ဆိပ်ကမ်းပိုင်သူ​ဌေးနဲ့ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တို့ ဖြစ်တာနဲ့အညီ ရန်ပွဲ၊တိုက်ပွဲ​တွေ ပဋိပက္ခ​တွေအမြဲဖြစ်​လေ့ရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့ရန်​သဖွယ် ဖြစ်​နေကြသူ​တွေပါ။ ဒီလိုစီးပွားပြိုင်၂ဦးလုံးက တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မြင်းပွဲကို​တော့ အထူးခုံမင်ကြပါတယ်၊ ဒီလိုနဲ့ပဲ နှစ်ရှည်လများ ဖြစ်တည်လာတဲ့ သူတို့ရဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုကို မြင်းပွဲတစ်ပွဲနဲ့ စည်းစိမ်ကုန် ​​လောင်း​ကြေး ထပ်ကာ အဆုံးသတ်ဖို့သ​ဘောတူခဲ့ကြပါတယ်၊ မြင်းပွဲရှိပြီဆိုရင် ကိုယ့်ပြိုင်မြင်းကို အ​ကောင်းဆုံးထိန်း​ကျောင်းနိုင်တဲ့ ​ဂျော်ကီကို လိုလာစမြဲပါ၊ ဒီလို စည်းစိမ်ကုန်၊ ဂုဏ်သိက္ခာကုန် ​အ​လောင်းစား လုပ်ထားတဲ့ပွဲမှာ ​ဂျော်ကီ​ကောင်းရှိဖို့ ပိုလိုအပ်လာပါတယ်။အဆိုပါ​ဂျော်ကီ​နေရာကို​ လုပ်ငန်းရှင်၂ဦးက မာယွန်​ဖေးဆိုသူ ဆိပ်ကမ်းအလုပ်သမားတစ်ဦးကို မျက်စိကျလာပါတယ်၊ သူက လူရိုးလူ​ဖြောင့်ဖြစ်သလို အလုပ်သမား​တွေရဲ့ နစ်နာဆုံးရှူံးမှု​တွေတန်ရာတန်​ကြေးပြန်ရ​ဖို့ ဂျင်ဂွမ်ယုံနဲ့ မကြာခဏ ထိပ်တိုက်​တွေ့​ဖြေရှင်းတတ်တဲ့ သူတစ်​ယောက်ပါ၊ မြင်းစီးပညာလည်း ​ထူးချွန်တာဖြစ်လို့ ...
Dhruva(2016) Dhruva (2016)အစားကောင်း အသောက်ကောင်းတွေ စားရရင် ချစ်သူခင်သူကို သတိရတတ်သလိုပဲ ဇာတ်ကားကောင်းတွေရှိလာရင်လည်း မလွတ်တမ်းဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ CM ရဲ့စေတနာပါ။ဘိုင်ရာဘာမင်းသားပါဝင်ထားတဲ့ ဒီ "Dhruva" crime thriller movie ကတော့ not very old but gold လို့ ဆိုရမှာပါပဲ။ crime ကိုမှmedical crime ကို အရင်းတည်ပြီး ကွင်းဆက်အများအပြား ချိတ်ဆက်ထားတာမျိုးပါ။"သာမန်ပြည်သူတွေရဲ့ ကံကြမ္မာကို နိုင်ငံရေးသမားတွေက ချုပ်ကိုင်တယ်၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ ကံကြမ္မာကိုတော့ စီးပွားရေးသမားတွေက ချုပ်ကိုင်တယ်....."ပုံမှန်ဆိုရင် ခိုးမှု၊ လုယက်မှု၊ ပြန်ပေးဆွဲမှုတို့ဟာ အများအားဖြင့် ငွေကြေးမပြည့်စုံမှုကြောင့် ကျူးလွန်လေ့ရှိတဲ့အရာမျိုးတွေပါ။ဒါပေမဲ့ သာမန်ပြစ်မှု အသေးလေးတွေကိုဗန်းပြပြီး နောက်ကွယ်မှာ ကြီးမားတဲ့ ပြစ်မှုကြီး ရှိနေတယ်ဆိုရင်ရော......ဆင်းရဲနိမ့်ကျစွာ မွေးဖွားလာပေမဲ့ ပါတီခေါင်းဆောင်တစ်ဦးရဲ့ လူသတ်မှုကို ကိုယ်စားအပြစ်ခံယူရင်း အဆိုးထဲက အမြတ်ထုတ်တတ်တဲ့ထက်မြက်လွန်းတဲ့ Siddarth Abimanyu က သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီး မင်းသားခေါင်းစွပ်ထားတဲ့ဘီလူး ...
Ladies vs Ricky Bahl (2011) မင်းသားချော ရမ်ဘီဆင်းနဲ့ မင်းသမီးချော အနွတ်ရှ်ကားတို့ ပါဝင်ထားတဲ့ Romance Comedy ဇာတ်ကားလေးပါ...တခြားမင်းသမီးတွေလဲ ပါပါသေးတယ်...ရမ်ဘီဆင်းနဲ့မမတစ်သိုက်ပေါ့...လှည့်ကွက်တွေ အရိုကွက်တွေနဲ့ လုံးဝ Fun ဖြစ်ရမယ့်ဇာတ်ကားပါ။ဇာတ်လမ်းလေးလဲ မိုက်သလို သရုပ်ဆောင်တွေကလဲ အလန်းမလို့ဒီလိုပိတ်ရက်မှာ အနားယူဖို့ လုံးဝလက်လွတ်မခံသင့်ပါ။ File size…(4 GB)/(1.3 GB)/(680 MB) Quality….BluRay 1080p/720p/360p Format…mp4 Duration….02:20:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Nyeinsaeya Aung Translated by Alias
Pineapple Express (2008) IMDb Rating (7) / Rotten Tomatoes (68%)Peem Heaven ကွတ်ကီးစားလိုက်ရသလို ကွဲပြီးကောင်းနေတဲ့ ခံစားချက်မျိုးနဲ့ ဒီဇာတ်ကားက အပြဲကားပါ။Weed သောက်ရင်းကွဲတဲ့ဇာတ်ကားတွေထဲ တော်တော်မိုက်တဲ့ အက်ရှင်အခွီဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားတွေကလဲ ဟာသနဲ့ရှယ်လိုက်ဖက်တဲ့ James Franco နဲ့ Seth Rogen တို့ အတွဲပါ..မင်းသမီး Amber Heard လဲ ပါပါသေးတယ်။ဇာတ်လမ်းကတော့...Dale တစ်ယောက် Pineapple Express လို့နာမည်ရတဲ့ ရှားပါး Weed တစ်မျိုးကို ဆေးခြောက်ရောင်းတဲ့ Saul ဆီကနေ ကြိုးစားပမ်းစား ဝယ်လာခဲ့ပါတယ်..ကံကဆိုးတော့ သူအလုပ်လုပ်နေတုန်းမှာ လူသတ်မှုတစ်ခုကို မြင်လိုက်ရပြီး အခင်းဖြစ်နေရာမှာ သူ့ရဲ့သောက်လက်စ လက်ကျန် မုန့်(Weed) ကိုပစ်ထားခဲ့မိပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီလူသတ်သမားက တစ်မြို့လုံးကို ဒိုင်ခံပြီး ဆေးခြောက်ဖြန့်နေတဲ့ Ted ဖြစ်နေတော့ မျက်မြင်သက်သေဟာ Pineapple Express Weed နဲ့ဆက်စပ်တဲ့ကောင်မှန်း သိသွားပါတော့တယ်...Ted ...
Ambulance(2022) ဒါရိုက်တာ မိုက်ကယ်ဘေးရဲ့ ရုပ်ရှင်အသစ်ကြီး ရပါပြီ။ အဖောက်အခွဲ အတိုက်အခိုက်တွေမှာ ပိုင်ပြီး ထရန်စဖော်မာကားတွေနဲ့လူသိများတဲ့ ဒါရိုက်တာကြီးရဲ့ လက်ရာသစ်ပါပဲ။ဂျိတ် ဂျီလင်ဟော ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားပြီး မှုခင်း အက်ရှင် ဒရာမာ အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်က ဘဏ်ကိုဓားပြတိုက်ပြီးထွက်ပြေးချိန်မှာ သေနတ်မှန်ထားတဲ့ ရဲတစ်ယောက်ရယ် အရေးပေါ်ဆေးအကူကောင်မလေးတစ်ယောက်ရယ် ဓားစာခံပါလာတယ်။ဒီတော့ ရဲတွေ အက်ဖ်ဘီအိုင်တွေကလည်း အတင်းဝင်မလုံးရဲဘဲ နောက်ကနေ ကပ်လိုက်ရင်း ညှိုနှိုင်းနေရတဲ့အခြေအနေပါ။ မိုက်ခဲညီအစ်ကိုကလည်း လူနာတင်ကားဆိုတာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး တစ်မြို့လုံးပတ်မောင်းပြေးရင် လွတ်မြောက်ဖို့ အကြံမျိုးစုံထုတ်ကြတဲ့အခါ... File size…(3.24GB)/(1.7GB)/(913MB) Quality….Webrip 1080p / 720p / 480p Format…mp4 Duration….02:16:00 Genre...Action/Crime/Drama Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Mr. Anderson Translated by....Mr. Anderson
Burn (2022) Burn (2022) ========== IMDb Rating - 7.7/10မက်ခ်စ် ဟာ LA မြို့မှာရှိတဲ့ နာမည်ကျော်လူဆိုးဂိုဏ်းတွေရဲ့ အဓိကခေါင်းဆောင် ဂျီနို ပင်နာရို အားကိုးရတဲ့ ညာလက်ရုံးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ သူရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်သူ ကြေးစားလူသတ်သမား ဆက်သ် ဟာ မက်ခ်စ် ကို တိတ်တဆိတ်ဆက်သွယ်ပြီး… "မက်ခ်စ် ရဲ့ ညီဖြစ်သူ ဗင့်စ် ဟာ...သူတို့ဘော့စ် ပင်နာရိုရဲ့ မိန်းမနဲ့ တိတ်တိတ်ပုန်းညားနေပြီး စကားများရင်း သူမကို သတ်မိသွားကြောင်း" ပြောခဲ့ ပါတယ်။ဒါ့အပြင် "ဂျီနိုပင်နာရို ဟာ...သူအရမ်းချစ်ရတဲ့ မိန်းမကိုကြာခိုတဲ့အပြင် သတ်ပါသတ်သွားတဲ့ ဗင့်စ် ကိုသတ်ဖို့ ဆက်သ် ဆီကို အလုပ်အပ်ထားကြောင်း . . . ဗင့်စ် က မက်ခ်စ် ရဲ့ညီဖြစ်တဲ့ အတွက် သူ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီး… လိုက်မသတ်ခင် အချိန် ၂ ရက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း".... ဆက်သ် က ပြောလိုက်တဲ့အခါ…မက်ခ်စ် တစ်ယောက် သူ့ရဲ့ညီကို ကြေးစားသမားရဲ့ လက်ထဲကနေ လွတ်ဖို့အပြင် တစ်ဖက်မှာလည်း သူ့ရဲ့အလုပ်မထိခိုက်အောင် အချိန် (၂) ရက်အတွင်း ...
Death on the Nile (2022) ဒီရုပ်ရှင်ကိုလည်း မျှော်နေကြသူတွေ များပါတယ်။ Murder on the orient express ရုပ်ရှင်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထွက်လာတာပါပဲ။ စုံထောက်ကြီး ဟာကျူလီ ပွာရိုးနဲ့ ဘုခ် တို့ အမှုလိုက်ကြဦးမှာပါ။ရုပ်ရှင်နာမည်အတိုင်း လူသတ်မှုကတော့ နိုင်းမြစ်ထဲက သင်္ဘောကြီးတစ်ခုပေါ်မှာဖြစ်တာပါ။ သင်္ဘောပေါ်မှာပါနေတဲ့ ခရီးသည်တွေကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ မဖြစ်နိုင်တာမို့ ထုံးစံအတိုင်း တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ကို စစ်မေးပြီး သဲလွန်စတွေ ချိတ်ဆက်ပြီး တရားခံကိုဖော်ထုတ်ရမှာပါပဲ။ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးကို အစကနေ အဆုံးထိ အတူတူခန့်မှန်းရင်း ခံစားသွားလို့ရပါတယ်။ ဘယ်သူသေမှာလဲ ဘာကြောင့်လဲ ဘယ်သူသတ်တာလဲ ဘယ်လိုသတ်တာလဲ စသည်ဖြင့် တွေးစရာတွေ အများကြီးပေးပြီး နောက်ဆုံးမှပဲ ရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကျော်သရုပ်ဆောင်တွေအများကြီးပါဝင်ထားတာမို့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေရော ဇာတ်လမ်းရောက ပရိသတ်တွေအားလုံး စိတ်ကြိုက်ဖြစ်မှာပါ။ File size…(1.8 GB)/(2 GB)/(900 Mb)/(500 Mb) Quality….BluRay DS4K HEVC/ 1080p / 720p / 480p Format…mkv/mp4 Duration….02:07:00 Genre...Drama, Crime, Mystery Subtitle….Myanmar ...
L.A. Confidential (1997) L.A. Confidential(1997) IMDb....8.3.....Rotten...99% ဒီကား မှာ အဓိကမင်းသား ၃ယောက်ပါတယ်...Russell Crowe,Kevin Spaceyနဲ့ Guy Pearce ရယ်.. .သူတို့တွေသရုပ်ဆောင်ကောင်းကြသလို နာမည်ကြီးအထင်ကရကားတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့တာကို တော်တော်များများသိကြမယ်ထင်တယ် .. သူ့တို့(၃)ယောက်ဟာ စုံထောက်ရဲအရာရှိတွေပါ...ဇာတ်ကားအစမှာ သူတို့(၃)ယောက်ရဲ့ခံယူချက် အလုပ်အပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ထားတွေကို တဖြည်းဖြည်းပြသွားတယ်....အဲ့ဒီ အခန်းတွေပါးပါးလေးပြသပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ခံလိုက်ရတဲ့ လူသတ်မှု ကြီးဆီရောက်သွားတယ်..လူသတ်မှုကြီးဟာ စုံထောက်ရဲအရာရှိဖြစ်တဲ့ သူတို့(၃)ယောက်ခေါင်းပေါ်ရောက်လာပါတယ်...လူသတ်မှုဟာ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲမှာ ရက်ရက်စက်စက်ပစ်သတ်ခံလိုက်ရတာပါ. ..သေဆုံးသူတွေထဲမှာ ရဲစုံထောက်တစ်ယောက်တောင်ပါ ပါတယ်.... ကြည့်ရှူတဲ့သူဟာ ဇာတ်ကောင် ၃ ယောက်နောက်ကိုအပြေးအလွှားလိုက်ရ သလို ဘယ်သူသတ်လဲပါ တစ်ဆက်ထဲ အဖြေထုတ်နေရတ ယ်... လူ(၃)ယောက်ရဲ့အမြင်ကိုခင်ဗျားတစ်ယောက်ထဲ ခံစားရင် အမှုကိုလည်းလက်လှမ်းမှီသလောက်ခင်ဗျားဟာ ကော်ဖီပူပူနွေးနွေးလေးသောက်ရင်း အတွေးတွေ လွန့်လူးနေလိမ့်မယ်. ..နောက်တစ်ခုက ဒီကားကြည့်နေစဉ် ဇာတ်ကောင်တွေနာမည်တွေကို အသေအချာလေးမှတ်ပြီး ကြည့်သင့်ပါတယ်. ..ဘာလို့ဆို အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတော်တော်များနဲ့ဇာတ်ကောင်နာမည်တွေဟာ စကားပြောခန်းတွေနဲ့ပုံဖော်ထားလို့ပါ..ပြီးတော့ ဒီကားထဲက မင်းသမီး kim Basinger က အော်စကာ(ဇာတ်ပို့ဆု)ရရှိခဲ့သလို အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွန်းဆုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်.. နောက်တစ်ခု ခင်ဗျားတို့ သတိထားမိမှာက Russell Crowe ရဲ့ မျက်လုံးတွေပါပဲ.. .သူ့မျက်လုံးတွေက ယုန်ငယ်လေးဟန်...ပြောရရင် Beautiful mind ကားထဲက ပါမောက္ခတစ်ယောက်ရဲ့ဟန်ပန်..သူ့ရဲ့ ပင်ကိုယ်ဟန်ပဲလား မသိ.. .သို့ပေမယ့် အဲ့မျက်လုံးတွေကနေ အချိန်တော်တော်များများ မုန်ယိုနေတဲ့ ဆင်ရိုင်းတစ်ကောင်လိုပေါက်ကွဲရက်စက်ပြတာ .. ဒီဘဲကြီးသရုပ်ဆောင်တာ ...
The Batman (2022) ဒါလည်း အားလုံးကြည့်ချင်နေမယ့် ရုပ်ရှင်ပါပဲ။ Rating 8.3 ထိ ရထားတဲ့ တစ်မျိုးဆန်းသစ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းပါပဲ။ မင်းသားကလည်း တွိုင်းလိုက်ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ဒါမှမဟုတ်နာမည်ကျခဲ့တဲ့ ရောဘတ် ပတ်တီဆန်ပါပဲ။ ဒီအထဲမှာ catwoman ကိုလည်း မိတ်ဆက်ထားပြီး အဓိက ဗီလိန်ကတော့ ရစ်ဒလာ ဆိုတဲ့ နာမည်ကျော်ဘတ်မန်းဗီလိန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကလည်း စုံထောက်ဆန်ဆန် ပဟေဠိတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာမို့ ထိုင်ရမထ ကြည့်ချင်မယ့် ရုပ်ရှင်မျိုးပါပဲ။ ကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်လိုက်ကြပါဦး။File size…(4.4 GB)/(1.8 GB)/(1 Gb)/( 500 Mb) Quality….WEB-DL 4K HEVC / 1080p / 720p / 480p Format…mp4 Duration….02:56:00 Genre...Drama, Action, Crime Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Mr. Anderson, Nyeinsaeya Aung Translated by Mr. Anderson
The Quiet Family (1998) The Quiet Family (1998) ~ IMDb - 7/10, Rotten Tomatoes - 80% ~Directed By Kim Jee Won" There isalot of extreme emotion in Korean film. It's because there arealot of extremes in Korean society. " ဆိုတဲ့ ဘွန်းဂျွန်းဟို စကားအတိုင်း ပတ်ချန်းဝုတို့ ဘွန်းဂျွန်းဟိုတို့ဟာ ကိုရီးယားရဲ့ဘ၀တွေကို မသိမသာရော သိသိသာသာပါ ထင်ဟပ်နေတဲ့ Horror/Thriller ကားတွေကို ရိုက်ခဲ့ကြ ကမ္ဘာနဲ့ချီအောင်‌ အောင်မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားရဲ့ Horror/Thriller လိုင်းမှာ ဆရာ့ဆရာကြီး ပတ်ချန်းဝုတို့ ဘွန်းဂျွန်းဟို တို့ပြီးရင် Kim Jee ...
Vanishing(2022) Vanishing(2022) အညွှန်း**********************မင်းသားYoo Yeon-Seok အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ ပြင်သစ်ဒါရိုက်တာ Denis Dercourt ရိုက်ကူးပြီး ကိုရီးယား-ပြင်သစ်ပူးပေါင်းတင်ဆက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Crime / Drama ကားကြီးဖြစ်ပါတယ်.. ပြင်သစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာလည်း ပြသခဲ့ပြီး ကိုရီးယားမှာလည်း ရုံတင်‌တဲ့ကားကြီးဖြစ်ပါတယ်...ပြင်သစ်ဆရာဝန် ပရော်ဖက်ဆာ Alice က ပျက်စီးနေတဲ့ အလောင်းတွေကနေ ပြန်လည်အချက်အလက်ရှာဖွေတဲ့နည်းပညာကို တစ်ဖက်ကမ်းခတ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ မှုခင်းဆေးပညာပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး တောင်ကိုရီးယားကို ဆေးပညာဟောပြော‌ပွဲတစ်ခုရှိတာကြောင့်လာရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်.... ဒါပေမယ့် အဲ့အချိန်မှာပဲ သူ့ကို ကိုရီးယားရဲတပ်ဖွဲ့က မြစ်ထဲမှာတွေ့တဲ့အလောင်းတစ်ခုကိုစစ်ဆေးပေးဖို့ခေါ်ဆို အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်... အဲ့လို ကူညီစုံစမ်းပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ နောက်ကွယ်က ကြောက်စရာကောင်းလွန်းတဲ့မှုခင်းကြီ:ကိုသိလိုက်ရချိန်မှာတော့... File Size :(1.1GB)(532MB) and (115 MB) Quality : FHDRip 1080p, 720P Format…mp4 Duration…01:30:00 Genre : Action , Drama,Comedy Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Thynn Nu Swe Encoded by Phyo Pyae
Furioza (2021) Furioza (2021) ဇာတ်လမ်းအညွှန်း ရှယ်ကြမ်း အက်ရှင်ကြိုက်သူများအတွက်ပါ။ ဒါဝိ၊ ဇီကာ နဲ့ အာရှုတို့က ချာတိတ်ဘဝတုန်းက ဖျူရီအိုဇာဆိုတဲ့ လူမိုက်ဂိုဏ်းအဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့။ အတိတ်ဆိုးတွေကနေ ရုန်းထွက်ရင်း ဆယ်နှစ်အကြာမှာ ဒါဝိက ဆရာဝန်ဖြစ်လာပြီး ဇီကာက ရဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂိုဏ်းထဲမှာပဲ လူမိုက်ကြီးအဖြစ် ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့သူကတော့ ဒါဝိရဲ့အစ်ကို အာရှုပါပဲ။ဇိကာတို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က အန့်မန်းဆိုတဲ့ မူးယစ်ရာဇာကို ဖမ်းချင်နေကြတာပါ။ အန့်မန်းက ဖျူရီအိုဇာဂိုဏ်းနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိနေတာကြောင့် အာရှူကိုဖမ်းမယ်လို့ အကျပ်ကိုင်ပြီး ဒါဝိကို သူလျှိုအဖြစ် ဂိုဏ်းထဲ ပြန်ဝင်ပေးဖို့ အတင်းအကျပ်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဝိတစ်ယောက် သူ့ဂိုဏ်းဟောင်းထဲ ပြန်ရောက်သွားရာက ဘယ်လို ရှုပ်ထွေးပွေလီတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ ကြုံရမလဲဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ပဲ ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦး။(ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်ကတော့ May Myat Thu ပါ။) File Size : 2.7GB, 1.1GB & 539MB Quality ...
Bachchhan Paandey(2022) Bachchhan Paandey(2022) အညွှန်း*******************************IMDb...7.4အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ အက်ရှေးကူးမားကြီးရဲ့ ဇာတ်ကားသစ်ကြီးလာပါပြီဗျား...မာယာ(Kriti Sanon)က ကြိုးစားနေဆဲလက်ထောက်ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ဒါရိုက်တာအဖြစ် လက်စွမ်းပြနိုင်ဖို့ ဇာတ်လမ်းရှာနေသူပါ။အတွေးသစ်အမြင်သစ်လူငယ်တစ်ယောက်အဖို့ရှေးရိုးစွဲနေတဲ့ ဒီအသိုင်းအဝန်းမှာထိုးဖောက်ဖို့မလွယ်ဘူး.. ထုပ်လုပ်သူက မင်းရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်အမြတ်ရဖို့သေချာတဲ့ ဒီအခေတ်အကြိုက် ဂန်းစတားအကြောင်းရိုက်ဖို့ကြိုးစားပြီးဇာတ်ညွှန်းယူလာခဲ့လို့ဆိုတယ်.. ဒီတော့မာယာက ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ ဂန်းစတားတွေအကြောင်းစုံစမ်းတယ်...အဲ့ဒီမှာ အထူးခြားဆုံးဂန်းစတားက ဘချမ်းပန်ဒေးပဲ...သူ့ကြောင့်ရဲတစ်ချို့တောင်နှုတ်ထွက်စာတင်ကြသလိုတစ်ချို့ဂန်းစတားတွေကအပြင်မှာထက်ထောင်ထဲမှာနေတာ ပိုလုံခြုံတယ်ဆိုပြီး ထောင်ထဲကမထွက်ဖို့တောင်တောင်းဆိုးကြတဲ့ ခေတ်ပြိုင် လူမိုက်တွေရှိသတဲ့...ဒီလို ဂန်းစတားကြီ:အကြောင်းကို မာယာတစ်ယောက်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အခါမှာတော့...အက်ရှေးကူးမားရဲ့ ဒီဇာတ်ကားကလည်း စောင့်နေတဲ့သူတွေစိတ်မပျက်စေရဘူး..ဇာတ်လမ်းအစမှာကတည်းကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသလို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဂန်းစတားကြီ:အကြောင်းကို ဖော်ပြသွားတယ်...မထင်ထားတဲ့ Plot Twist တွေပါသလို Comedy ဆန်ဆန်လေးတွေလည်းပါလို့လုံးဝ မိုက်ပါတယ်လို့ညွှန်းချင်ပါတယ်...မင်းသမီးကြီး(၂)ဦးဖြစ်တဲ့ Jacqueline Fernandez , Kriti Sanon တို့လည်းပါဝင်တာမို့ မျက်စိအေးဦးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်...File Size :(1.25GB) and (411 MB) Quality : WEB-DL 720P Format…mp4 Duration…02:27:00 Genre : Action , Crime ,Comedy Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated ...
B Cut (2022) B Cut (2022) ဇာတ်လမ်းအညွှန်း ဒီ Action, Crime, Thriller အမျိုးအစား ရုပ်ရှင်လေးက ဖုံးကွယ်လိုသူ နဲ့ ဖော်ထုတ်လိုသူတို့အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာပါ။ဆွန်းဟျွန်း ဆိုတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်က စမတ်ဖုန်းပြုပြင်ခြင်း အထူးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီလေးတည်ထောင်ထားပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဖုန်းပြုပြင်ဖို့အတွက် သူ့ဆီကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဆွန်းဟျွန်းကတော့ ဖုန်းကို ပြင်ရုံမက ဖျက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံကစလို့ ဒေတာတွေကိုပါ ပြန်လည် ရယူပေးရာကနေ ဇာတ်လမ်းတစ်ခု စတင်လာခဲ့ပါတယ်။ A Cut နဲ့ B Cut ဆိုပြီး ခွဲပြီး ဒေတာတွေ ပြန်ဖော်ပေးလိုက်ပါတယ်။ A Cut ကတော့ လူတိုင်းကြည့်လို့ရနိုင်တာတွေဖြစ်ပြီး B Cut ကတော့ အထူးလျှို့ဝှက် တစ်ကိုယ်ရည်ပဲ သိသင့်တာမျိုးပေ့ါ။ B Cut ဒေတာတွေကနေ စလိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းက တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော်တစ်ယောက်ရဲ့ လူမှုရေးဖောက်ပြန်တဲ့ကိစ္စတွေထိ ပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက်မှာတော့ ...ဆန်းဟျွန်းတစ်ယောက် ...
Night Drive(2022) Night Drive(2022) အညွှန်း*************************IMDb...7.0မှောင်ခိုမှုနဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရာဂျန်ကူရက်ဆိုသူဟာ NIA မှာ စစ်ဆေးခံခဲ့ရတယ်။နောက်နေ့မနက်မှာ သူ့ကို လာဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြားပြီးနောက် ရွှေတွေကိုနေရာရွှေ့ဖို့ စီစဉ်ခဲ့တယ်။ ရိုးသားတဲ့ တက္ကစီသမားလေး ဂျော်ဂျီဟာသူ့ချစ်သူ သတင်းကြေညာသူလေးရဲ့ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ညဘက်မှာ ကားတူတူပတ်မောင်းဖို့ ထွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ညမှာ ဝန်ကြီးရဲ့ ရွှေမှောင်ခိုအမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့သူကိုသူတို့ ကားတိုက်မိသလို ဖြစ်ပြီး ပြဿနာမျိုးစုံတက်ပါတော့တယ်...တစ်ဘက်မှာ အင်အားကြီးမားတဲ့ လူဆိုးဂိုဏ်းနဲ့ ရဲတွေအကြားသူဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကိုတော့.... File Size :(1.4GB) (737MB) and (309 MB) Quality : WEB-DL1080P5.1CH, 720p Format…mp4 Duration…01:56:00 Genre : Crime , Drama, Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Kit Encoded by Phyo Pyae